The Semalt Islamabad Expert Anopa mazano ekubata neReferrer Spam
Google Analytics ndeimwe yenzira dzakavimbika uye dzakasimba dzekutsvaga huripo huripo. Inokubatsira kuti uone kunaka kwekutengesa kwako uye kuwedzera mikana yako yekuwana zvakawanda paIndaneti. Zvinosuruvarisa, nzira ine shady iyo inotyisa uye spammers inoshandisa is referrer spam. Vanotarisira kunyengedza neGoogle Analytics account, uye kuburitsa kwewebsite yako kunowedzera - vendita tavolo ping pong usato.
Kana iwe uri webmaster, mutengesi wezvinhu, SEO unyanzvi kana blogger, unofanira kudzidza mazano anotevera kubva kuna Sohail Sadiq, nyanzvi yepamusoro Semalt .
Referrer spam rudzi rwekushamisa rwehuwandu hunoratidzwa mubhuku rako reGoogle Analytics, uye webmasters chete vanogona kuzviona. Referrer spam ndeyechokwadi fake traffic uye inokanganisa kunaka kwekushanya kwako. Iyo inoshanyira nzvimbo yako asi huwandu hwekudzivirira uye nguva inoshandiswa pane peji haisatarisiri. A referrer is a link that spammers share through the HTTP header when web browsers go from one page to the other. Nhoroondo yako yeGoogle Analytics ichacherechedza ruzivo urwu uye icharatidza sekushanyirwa zvakananga, izvo chaizvoizvo zvisina chakanaka pasina.
Mazano ekugadzirisa nekutarisa spam:
Kune dzimwe nzira dzekutarisana ne referrer spam mune account yako yeGoogle Analytics.Zimwe zvinhu zvikuru zvaunofanira kuyeuka zvinotsanangurwa pasi apa.
Chidzidzo # 1: Mutereri Spam muPiwik:
PaPiwik, nyanzvi dzakatanga kushandura kuderedza mararamiro emitambo yakapera makore akapfuura. Kana uri kushandisa Piwik, zvakakosha kuchengetedza basa iri rinovandudza, uye haufaniri kutarisa mawebhusayithi asingazivikanwi chero ipi zvayo. Nebasa rino, zvingava nyore kwauri kuti usabvisa referrer spam kubva kuGoogle Analytics nemishumo uye iwe unogona kuchengetedza zuva rako rishandurwa mukati meawa. Kana ukaona webhusaiti yehusaiti mune yako Google Analytics stat, unofanira kuwedzera kuClublist yakashata nokukurumidza. Kana iyo itsva spammers inoratidzika zuva nezuva, unogona kuwedzera ose kuPlacklist uye anogona kunatsiridza kunaka kwehutaneti hwako.
Chidzidzo # 2: Referrer Spam muAtekete yako yeGoogle Analytics:
Google Analytics haina kupa chero kuchengetedzwa kwe spam, asi iwe unogona kugadzira zvinyorwa kuti uchengetedze kuchengeteka nekuchengeteka kwewebsite. Kuti ugadzire mafikisi kuGoogle Analytics, unofanira kuenda kuMutungamiri tab uye chengetera pane All Filters sarudzo. Pano, iwe unofanirwa kuumba matsva madzinza matsva ayo asingabvumiri kutumira spam zvichienderana nemagadziro ako. Muchikamu cheFritter Pattern, unogona kupinda mazita ose e spam uye uite kuti ibvise mukati memasekondi. Chikamu chakanakisisa chemuitiro uyu ndechokuti iwe unogona kubvisa chero shanduro yekutsvaga spam uye haufaniri kushandisa chero zvigadzirwa zvekushandisa. Kunyange apo iwe unogamuchira zvikumbiro zvakawanda kubva kune spammers, unogona kuisa mafiritsi akawanda uye usabvisa zvose zvavo kuti uvandudze tsananguro dze analytics.
Kana uchida kudzivisa kazhinji spammers pane imwe nguva, mazano maviri pamusoro apa achashanda zvakanaka kwauri. Chokutanga pane zvose, iwe unofanira kukudziridza kunzwisisa kwekutumira spam uye kuti kunobata sei Google Account yako. Iwe unogonawo kuchengetedza nzvimbo yako nekuchinja zvirongwa zveyako .htaccess file, asi iyo ndiyo chinhu chingaita.